May | 2017 | Hla Hla Htay's Notes
two color knitted hat May 28, 2017
Filed under: Knitting,Mylife — hhh123 @ 4:33 pm
Tags: 4me, fair isle, Hat, Knitting
start with 96 stitches, edging 10 rows, middle 20 rows,
then reduce with 6k, k2tog and k all
circular needle egret 7
Easy Japanese လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ May 3, 2017
Filed under: Japanese,Language,Myanmar,NLP,Resource,Translation — hhh123 @ 4:21 pm
Tags: င်္Facebook, Japanese, Myanmar, Translation
These are collected from fb group လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=433796670302779&id=365888197093627
လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ fb page
人間関係-にんげんかんけい~ လူမှုဆက်ဆံရေး 🤝
(1) 友達になる- ともだちになる => မိတ်ဆွေဖြစ်သည်
(2) 友情-ゆうじょう=> မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ
(3) 恋人 -こいびと=> ချစ်သူ/ရည်းစား
(4) 愛する-あいする => ချစ်သည်
(5) 憎む -にくむ => မုန်းသည်
(6) 知り合う-しりあう=> အသိဖြစ်သည်
(7) 知り合い-しりあい => အသိမိတ်ဆွေ
(8) 付き合う-つきあう=> အဖော်လုပ်သည်
(9) 態度-たいど => သဘောထား
(10) 行い-おこない => အပြုအမှု
(11) 性格-せいかく => အကျင့်စရိုက်
(12) 性質 -せいしつ=> အမှုအကျင့်
(13) 交際する -こうさいする => ဆက်စပ်နားလည်သည်
(14) 約束する-やくそくする =>ကတိပေးသည်
(15) 紹介する- しょうかいする=> မိတ်ဆက်ပေးသည်
(16) 挨拶する- あいさつする=> နှုတ်ခွန်းဆက်သည်
(17) 招待する-しょうたいする => ဖိတ်ခေါ်သည်
(18) 訪問する -ほうもんする => အလည်သွားသည်
(19) 歓迎する-かんげいする=> ကြိုဆိုသည်
(20) 尊敬する-そんけいする => လေးစားသည်
(21) 信頼する- しんらいする =>ယုံကြည်သည်
(22) 信用する-しんようする=> ယုံကြည်သည်
(23) 相談する – そうだんする=> တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်
(24) 謝る-あやまる=> တောင်းပန်သည်
(25) 許す -ゆるす=> ခွင့်လွှတ်သည်
(26) 頼む- たのむ=> တောင်းဆိုသည်
(27) 断わる- ことわる=> ငြင်းဆိုသည်
(28) 励ます – はげます=> အားပေးသည်
(29) 助ける -たすける => ကူညီသည်
(30) 手伝う- てつだう=> ကူညီသည်
(31) からかう=> နောက်ပြောင်သည်
(32) ためらう=> တွေဝေသည်
(33) 疑う -うたがう => သံသယဖြစ်သည်
(34) 誤解する – ごかいする=> နားလည်မှုလွဲသည်
(35) 噂する-うわさするい=> ကောလဟာလပြောသည်
(36) 嘘をつく- うそをする =>လိမ်ညာသည်
(37) 喧嘩する – けんかする => ရန်ဖြစ်သည်
(38) 友人- ゆうじん=> သူငယ်ချင်း
(39) 話し合い- はなしあい=> နှီးနှောဖလှယ်ခြင်း
(40) 愛着- あいちゃく=> သံယောဇဉ်/စွဲလန်းချစ်မိခြင်း
(မည်သူမဆို copy/ share လွတ်လပ်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။)
▶️=> おみせをきめるとき (ဆိုင်ရွေးတဲ့အချိန်)
▶️=> おみせに はいる とき(ဆိုင်ထဲဝင်ချိန်)
ဒါ တစ်ယောက်ထဲ ကုန်အောင်စားနိုင်ပါ့မလားမသိဘူး။
KEEP ON READING MORE « « « « « « « « « « « « « « « «
Just2Translate 中英翻译服务 May 2, 2017
#nihongosoumatomen3kotoba N3 @ Japanese Language မွနျမာ 日本語 (facebook group)
Filed under: Japanese,Language,Myanmar — hhh123 @ 3:25 pm
Tags: #NihongosoumatomeN3Kotoba, fb, Japanese, Myanmar
These are collected from #nihongosoumatomen3kotoba posted by 優花‎ @ Japanese Language မွနျမာ 日本語 (facebook group) https://web.facebook.com/groups/766915153368643/
To search : https://web.facebook.com/groups/766915153368643/search/?query=%E5%84%AA%E8%8A%B1
Nihongo Sou Matome N3 Grammar with Myanmar translation
３）お勘定をお願いします。（おかんじょうをおねがいします）＝＞ ကျသင့်ငွေကို လာပေးပါ။
４）別々に払う（べつべつにはらう）＝＞　သက်သက်ဆီ ပေးချေသည်။
５）別々でお願いします（べつべつでおねがいします）＝＞　သက်သက်ဆီ ရှင်းပေးပါ။
６）割り勘にする（わりかんにする）＝＞　ကျသင့်ငွေကုို မျှခံသည်။
１１）カードの有効期限を確認する（カードのゆうこうきげんをかくにんする）＝＞　ကဒ်ရဲ့ သုံးစွဲနိုင်ခွင့်နောက်ဆုံးရက်ကို အတည်ပြုသည်.
１３）おつりをもらう＝＞　အကြွေပြန်အမ်းသည်ကုို ယူသည်.
２０）今月の生活費が不足する（こんげつのせいかつひがふそくする）＝＞　ဒီလ အသုံးစားရိတ်မလောက်ဘူး
２５）むだを省く（むだをはぶく）＝＞　အလဟသဖြုန်းတီးမှုကို ရပ်နားသည်။
２）飲み会（のみかい）＝＞　ပါတီ(အရက်သောက်ရင်း စကားပြောကြသည့် ပါတီ)
１６）ビールを一気に飲む（ビールをいっきにのむ）＝＞　ဘီယာကုို တစ်ကျိူက်တည်းနဲ့အကုန်သောက်။
３１）グラスが割れる（グラスがわれる）＝＞　ဖန်ခွက်က ကွဲသွားသည်။
３２）ビールびんを倒す（ビールびんをたおす）＝＞　ဘီယာပုလင်းကို တုိုက်ချသည်။လှဲချသည်။
３３）ビールびんが倒れる（びーるびんがたおれる）＝＞　ဘီယာပုလင်းကို လဲကျသည်။
３４）ほかの客に迷惑をかかる（ほかのきゃくにめいわくをかかる）＝＞　တခြားသော ဧည့်သည်များကို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. တခြားသူတွေ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင် နေကြရအောင်။
２）子どもを連れる（こどもをつれる）＝＞　ကလေးကုို ခေါ်သွားသည်။
４）外食をする（がいしょくをする）＝＞　အပြင်မှာ ဝယ်စားသည်။
５）お昼を食べる／昼食をとる（おひるをたべる／ちゅうしょくをとる）＝＞　နေ့လည်စာ စားသည်။
６）ランチ　＝＞　နေ့လည်စာ.
７）雰囲気のいい店（ふんいきのいいみせ）＝＞　လေဝင်လေထွက်(အပြင်အဆင်) ကောင်းမွန်သောစားသောက်ဆုိုင်
８）満席（まんせき）＝＞　ထုိုင်ခုံပြည့်(ဆုိုင်ထဲမှာ လူပြည့်နေ)
１４）ウエートレスにおすすめを聞く（ウエートレスにおすすめをきく）＝＞　စားပွဲထုိုးမလေးရဲ့(စားသောက်စရာ) ထောက်ခံပေးမှု(ညွှန်ပြပေးမှု)ကို နားထောင်သည်။
１５）量が多い（りょうがおおい）＝＞　ပမာဏက များပြားသော။
１６）量が少ない（りょうがすくない）＝＞　ပမာဏက နည်းပါးသော။
１７）注文が決まる（ちゅうもんがきまる）＝＞　အော်ဒါမှာဖုို့ သတ်မှတ်သည်။
２３）食器を下げる（しょっきをさげる）＝＞　(စားသုံးပြီးသော)ပန်းကန်များကုို သိမ်းဆည်းသည်။
２４）料理を残す（りょうりをのこす）＝＞　ဟင်းတွေက ကြွင်းကျန်ရစ်သည်။
２６）何名様ですか（なんめいさまですか）＝＞　ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ။(စားသောက်ဆုိုင်တွေသွားရင် အမေးခံရတာများ)
ယနေ့အတွက်စကားလုံး။ နှမျောစရာကောင်းလို့ အကြွင်းအကျန်(ချန်)မထားပဲ အကုန်စားကြရအောင်။
１０）パンツ＝＞　အောက်ခံ။အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ။
１１）朝のしたくをする（あさのしたくをする）＝＞　ကျောင်း။ရုံးသွားဖုို့ အသင့်ပြင်သည်။
１８）ひげをそる＝＞　မုတ်ဆိတ်မွေး ရိတ်သည်။
１９）ドライヤーで髪を乾かす（ドライヤーでかみをかわかす）＝＞　ဆံပင်အခြောက်မှုတ်စက်ဖြင့် ဆံပင်အခြောက်ခံသည်။
２６）おしゃれな人（おしゃれなひと）＝＞　စမတ်ကျသော လူ
２９）マフラーを巻く／する（マフラーをまく／する）＝＞　မာဖလာကို ပတ်သည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး။ ထမင်းစားပြီးသွားသည့်အခါတုိုင်း သွားတုိုက်ကြရအောင်။
２４）お互いに気に入る（おたがいにきにいる）＝＞　အပြန်အလှန် သဘောကျသည်။
２５）相手の予定を聞く（あいてのよていをきく）＝＞　တစ်ဖက်လူရဲ့အစီအစဉ်ကုို မေးသည်။
３１）田中さんの彼／彼氏（たなかさんのかれ／かれし）＝＞　တနခစံရဲ့ ကောင်လေး
３２）結婚を申し込む（けっこんをもうしこむ）＝＞　လက်ထပ်ဖုို့အတွက် လျောက်လွှာတင်သည်။
３４）あいまいな返事をする（あいまいなへんじをする）＝＞　သဲသဲကွဲကွဲမရှိတဲ့ တုံ့ပြန်ပြောဆုိုမှုကို ပြုလုပ်သည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး။ သဲသဲကွဲကွဲမရှိတဲ့ တုံ့ပြန်ပြောဆုိုမှုတွေ မလုပ်ကြရအောင်။
Average English Word Count in A page and How to count word in MS Excel
N3 の　結果
Archives Select Month April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 November 2017 October 2017 July 2017 May 2017 January 2017 October 2016 September 2016 August 2016 June 2016 May 2016 February 2016 September 2015 August 2015 July 2015 November 2014 October 2014 September 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 March 2011 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 December 2009 October 2009 May 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008